Mitsangàna ny Tomb Raider Fankalazana 20 Taona, azo alaina tsy ho ela amin'ny macOS | Avy amin'ny mac aho
Tsy misy isalasalana fa tsy iray amin'ireo lalao vao tonga io fa sarotra ampitaina ho an'ny mpampiasa Mac sy Linux. Amin'ity tranga ity dia manana fanambarana ofisialy avy amin'ny Feral Interactive izahay izay anambaran'izy ireo fa ny fisehoan-javatra mampitolagaga an'i Lara Croft, angano, ao amin'ny Rise of the Tomb Raider ho hita amin'ity lohataona ity.
Amin'ity tranga ity ho an'ireo izay tsy mahalala ny teti-dratsy, afaka mandroso isika fa hametraka ny asantsika amin'ilay tanora arkeology Lara Croft raha Mikaroha tanàna very any Kitezh ary avereno ny loharano masina, artifact taloha iray manana fahefana hanome ny tsy fahafatesan'ny zavamananaina. Tsy maintsy mampiasa ny fahendreny sy ny hakingany ary ny fitaovam-piadiana rehetra i Lara mba hahatratrarana ny Loharanon'Andriamanitra alohan'ny hahatongavan'ny fikambanana Trinite.
Ity dia Rise of the Tomb Raider lalao video izay tsy ho ela dia ho hita ao amin'ny macOS sy Linux araka ny nambaran'ireo tovolahy avy any Feral:
Ny tranokalan'i Feral natokana ho an'ny lalao dia efa misy ary io dia marika iray mazava fa eo am-pikatrohana ireo mpampiasa izay tia ilay saga ny lalao. Ny famaritana ny vidiny sy ny rafitra dia haseho ao aoriana Rehefa akaiky ny daty fandefasana dia izao vao afaka mandamina ny vaovao ofisialy momba ny fandefasana azy isika mandritra ny volana vitsivitsy.
Tsy isalasalana fa fitakiana tsara ho an'ny mpampiasa foana i Lara Croft sy ny lalao ary amin'ity tranga ity dia manana fizarana vaovao eo akaiky eo izahay ho an'ireo mpankafy Tomb Raider. Ny zavatra azo antoka dia ny matanjaka sy mitaky an'io rafitra io ny kalitaon'ny sary amin'ity saga lalao ity dia avo foana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Programa Mac » Games » Mitsangàna ny Tomb Raider Fankalazana 20 Taona, ho avy tsy ho ela ho an'ny macOS